Barhain: Toy Ny Adidy Nasionaly Ny Fampirafesana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2017 11:59 GMT
Atombontsika amin'ny resaka politika ny vaovao amin'ity herinandro ity, na ny marimarina kokoa, ireo politika, sy ireo fanambaran'ny mpanao politika iray, izay nanorisory ireo blaogera sasantsasany tao Barhain. Mandresy lahatra ireo lehilahy bahraini ny solombavam-bahoaka silamo iray (ny sasany milaza fa sangisangy izany) mba hanambady efatra ho fampihenana ireo ramatoa tsy manambady ao amin'ny firenena, ary namporisika ny vondron'ireo solombavambahoaka mba ho ohatra amin'izany. Manontany tena i Mahmood [Ang] raha toa ka nampidiriny ho ao anatin'izany ilay hany vehivavy namany, saingy heverina ho tsia ny valiny. Maneho hevitra izy:
Misaotra andriamatoa. Ankehitriny, miverena ao amin'ny lavabatonao. Ary ento miaraka aminao ihany koa ireo adala nifidy anao.
Manana izay lazainy ihany koa i Soul Search [Ang]:
« Tsy mila lehilahy toa anao ireo vehivavy mba hahazoany fiainana mendrika, matanjaka kokoa izy ireo, maha-tapa-kevitra kokoa, mbola manana fiainana tsy miankin-doha kokoa, ary tsy mila lehilahin'ny lozoka toa anao hanambady azy ireo. Miverena amin'i Riffa (fari-piadidiany), jereo ny fahoriana iainan'ireo olona ao, ireo lava-drano maloto efa mitobaka, ireo làlana feno lavaka goavana, ireo trano marobe andalam-pianjerana amin'ireo monina ao anatiny. Tsy azo ijanonan'ny fiara intsony, tsy zaka ny fofona, ary ny tsy misy farany ny lisitra »
Redha Askander, fantatra ihany koa amin'ny solonanarana hoe Concerned Citizen X, [ang], misarika ny saina ho aminà olana iray izay tiany mba hiadian'ireo solombavam-bahoaka hevitra, fa tsy ny resaka fanànana vady maro: ny tsy fahampian'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Toa ohatran'ny olona an'arivony no ho raisina ao Filipina ato ho ato “mba hanatsarana ireo asa”, raha toa ka ho alefa any Filipina kosa ireo bahraini mpanampy mpitsabo mba hiofana. Manoratra i Redha fa:
“Andao hazavaintsika ireo zavatra ireo. Manaiky aho, tena ampy fiofanana tokoa ireo mpanampy mpitsabo ao Filipina ireo, tsy vokatry ny fomba fanabeazana maoderina fotsiny, fa ao koa ny isan'ny mponina ao aminy izay 72 tapitrisa (isa tamin'ny taona 1998). Midika izany fa ny dokotera/mpanampy mpitsabo tsirairay dia tsy tapaka mifandray hatrany aminà kazaran'aretina samihafa anjatony, ary mahazo traikefa noho ny antony tokana hoe miverimberina miatrika ireo mety ho aretina rehetra… Raha mandefa ireo mpanampy mpitsabontsika hanao fiofanana any Filipina isika (izay tsy maintsy ho barhaini, mazava ho azy), tsy tokony handoa vola amin'ny governemantan'izy ireo ve isika mikasika ny fiofanana sy ny traikefa azo tao an-toerana, fa tsy hoe hanome ireo toerana banga ho an'ireo Filipiana, izay tokony handeha any amin'ireo Bahrainis manao fiofanana na any amin'ireo mpianatra nahazo diplaoma isan-taona?”
” Ho afaka aho hisakafo tsy misy ahiahy hoe iza no nahandro na hoe iza no hanadio ny lovia. Hivoaka aho tsy voatery hanana ahiahy hoe efa feno solika tsara ve ny fiara, efa madio ve izy, feno rivotra ve ireo kodiarana, efa misy rano ve any amin'ny toerana tokony hisy rano. Hanana trano madio aho tsy hampandalovina masinina fitrohana vovoka na hanala vovoka, na hamafa. Ho afaka hivoaka amin'izay maha-mety ahy aho tsy voatery hiahiahy amin'izay mety hahafatin'ny hatsiaka ahy. Tsy mila mitondra akanjo mafana maro aho, ary afaka mitanina andro araka izay tiako. Hanana ireo namako sy ny fianakaviako aho hiresahako, ary rehefa tena mangina loatra ny maraina, tsy voatery hanamarina raha toa tsy mandeha ny fandraisako hafatra. Mety afaka ny ho tena tezitra aho fa tsy halemy fanahy manoloana ny solosaina. Hanana mpiasa an-trano sy mpanao lakozia aho. Tsy hanana ahiahy na amin'inona na amin'inona intsony aho…”
Amin'ny lafiny iray, very saina i Mohammed AlMaskati [Ang] noho izay tsapany ho toy ny fihatsaràna ivelan-tsihy amin'ny dihy maoderina iray ankehitriny:
Dihy iray (manana fiaviana folklorika manjavozavo) ataonà vehivavy roa na maro io, toy ireo izay hita ao amin'ny lahatsary, miaraka amina mozika lafika mifototra amin'ny gadon'ireo zava-maneno sy ny mpihira iray mamerina ny “Diqny.. Diqny” (izay azo adika tsotsotra hoe “kapohy aho, kapohy aho”). Izany dia mifototra amin'izay azoko hamaritana azy fotsiny ho toy ny teknika hafahafa fampandihizana kibo, izay mifantoka amin'ny fanetsiketsehana ny vodiny amin'ny fomba manokana.
Izay hitako ho tena hafahafa, dia ny ankamaroan'ireo vehivavy mpandihy mivelona amin'io fomba io no tonga miaraka amin'ny burqa, ary dia mandihy amin'ny fomba tena mamoafady manoloana ireo vehivavy hafa, matetika aza dia manoloana ireo lehilahy mijery.
Aoka ho tsaroanareo fa io dihy io dia avy tamina fiarahamonina iray izay mihevitra ny hijab sy ny abaya ho toy ny fitafy madio nentin-drazana/ara-pinoana/mendri-kaja. Avy amina fiarahamonina mamporisika ny fanavakavahana eo amin'ny lahy sy vavy izy io, ary mandràra ny firaisana ara-nofo mialoha ny fanambadiana, sy ny sisa. Fa na izany aza (sady miresaka ny zavatra niainana aho), araka izay hitako manodidina ahy, ireo dihy izay maneho ny fanaovana vetaveta (na io diqny io izany na ilay fampandihizana kibo ejiptiana mahazatra) dia samy azo ekena malalaka avokoa, mandritra ireo fampakaram-bady na ireo fanasàna, ary dia samy tena hankatoavin'io fiarahamonina io avokoa.
Na izany aza anefa, tsy mandràra io dihy io amin'ny maha-dihy azy i Mohammed:
Mazava aminareo ve, tsy manana olana aho amin'ireo mpilatro, ireo vehivavy mpiangaly ‘catch’, ireo mpandroso sakafo mampidera nono any anatin'ireo trano fisotroana, ireo saribakoly Playboy. Hary saina tsara ireo izay nisafidy izany noho ny vola. Izay manosika azy ireo dia tsy samihafa velively amin'izay manosika ireo ‘strip-teaseuses’. Ny fifandanjan'ny andaniny sy ankilany no mampisy olana amiko. Ny toe-tsaina no olana amiko, ilay hoe afaka mandresy lahatra ireo vehivavy fa raha mitovy ara-batana na mihetsika toy ny bimbo izy ireo, na toy ny mpandihy iray amin'ireny rakitsary rap ireny, dia hanintona / hanaitaitra filàna. Tsy mihevitra akory hoe toy ny manaitaitra filàna no fijery an-dry zareo, izay tena mifanohitra tanteraka amin'ny fahatokisana ny tena izay azo av yamin'ny fahafantarana ny tenany ara-pananahana.
Mamintina izy hoe:
Amin'ny ankamaroan'ny olona, toy ny tsy manantsiny io dihy io. Amiko, fanoharana fanampiny iray fotsiny io amin'ny fomba izay nanodinan'ny kolontsaintsika antsika tsy ho amin'ny fandinihana ny tenantsika ihany, mba hahafahana mamandrika antsika amin'ireo fampanantenana fahafahampo malaky sy ireo fahafahampo eo noho eo, na dia amin'ny fomba maharikoriko sy miolankolaka aza izany.